🥇 အများဆုံးအမြတ်အစွန်းအတွက် လောင်းကြေးထပ်ခြင်း။ -2ကုန်သွယ်မှု ဇူလိုင်လ 2022 လေ့လာပါ။
ပျံ့နှံ့ခြင်းလောင်းကစားခြင်းဆိုင်ရာ2Trade 2022 လမ်းညွှန်ကိုလေ့လာပါ။
ဖြန့်ကြက်ထားသော လောင်းကစားပလပ်ဖောင်းများသည် သင့်အား အခြေခံပိုင်ဆိုင်မှုကို မပိုင်ဆိုင်ဘဲ ဘဏ္ဍာရေးတူရိယာတစ်ခု၏ အနာဂတ်စျေးနှုန်းကို မှန်းဆနိုင်စေပါသည်။ အဲဒီအထဲကတေကြ ရှေ, ဆီ, သဘာဝဓာတ်ငွေ့, စတော့ရှယ်ယာ, ညွှန်းကိန်းနှင့် cryptocurrencies ။
ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အယူအဆဆိုသည်မှာသင်ပိုင်ဆိုင်မှုသည်၎င်း၏လက်ရှိစျေးနှုန်းနှင့်အညီတက်လျှင်တက်သွားမည်လားဆိုသည်ကိုသင်ဆုံးဖြတ်ရန်ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်မှန်ကန်ပါကသင်၏အမြတ်ကိုသင်၏ရှယ်ယာ per-point ကိုယူပြီးပိုင်ဆိုင်မှုတိုးလာသည့်ရမှတ်များအရေအတွက်ဖြင့်တွက်ချက်သည်။
ကုန်သည်များသည်မကြာခဏရွေးချယ်ကြသည် ပျံ့နှံ့ အတွက်ကြောင့်ပွဲစားလောင်းကစား အများဆုံး တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်များ - အကျိုးအမြတ်များသည်အခွန်လွတ်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်သင်သည်မည်သည့်ကော်မရှင်မပေးဘဲကုန်သွယ်နိုင်ရုံသာမကပြန့်ပွားခြင်းသည်များသောအားဖြင့်ရိုးရာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနည်းလမ်းများထက် ပို၍ ယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်းရှိသည်။
ဤသို့ပြောဆိုခြင်းဖြင့်၊ သင်အာကာသထဲဘယ်တော့မှမ ၀ င်ရဘူးဆိုရင်ပျံ့နှံ့တဲ့အလောင်းအစားသည်ပထမတစ်ချက်မှာရှုပ်ထွေးပုံရနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏သင်ကြားရန်လိုအပ်သည့်အရာအားလုံးကိုရှင်းပြမည့်ကျွန်ုပ်တို့၏ပြန့်ပွားလောင်းခြင်းဆိုင်ရာ Learn2Trade 2022 လမ်းညွှန်ကိုဖတ်ရန်အကြံပြုလိုသည်။
မှတ်စု: ဖြန့်ကြက်ထားသော လောင်းကစားဆိုဒ်များသည် သင့်အား margin စနစ်ဖြင့် သင့်အကောင့်တွင်ရှိသည်ထက်ပို၍ ကုန်သွယ်မှုပြုနိုင်သော်လည်း၊ ၎င်းသည် သင်၏ကုန်သွယ်မှုကို ဖျက်သိမ်းပါက သင့်ရှယ်ယာတစ်ခုလုံးကို ဆုံးရှုံးရလိမ့်မည်ကို ဆိုလိုပါသည်။
ပျံ့နှံ့ခြင်းလောင်းကစားခြင်းသည် CFD များနှင့်ဆင်တူသည် - အရောင်းအ ၀ ယ်ပုံစံဖြစ်သည်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မင်းမှာပိုင်ဆိုင်မှုကိုမယူပဲနဲ့ရောင်းဝယ်နိုင်တဲ့ထောင်ပေါင်းများစွာသောငွေကြေးဆိုင်ရာကိရိယာများကိုသင်ရလိမ့်မယ်။ အဓိကအယူအဆကတော့လက်ရှိစျေးကွက်ပေါက်စျေးနဲ့နှိုင်းယှဉ်ရင်ပိုင်ဆိုင်မှုတန်ဖိုးတိုးလာမယ်၊ ကျဆင်းမယ်ထင်သလားဆိုတာကိုသင်စဉ်းစားဖို့လိုတယ်။
ဥပမာ FTSE 100 သည်အချက် ၂၇၀၀ ဖြင့်အရောင်းအဝယ်ပြုလျှင် - 'long' order သည်သင်အညွှန်းကိန်းတန်ဖိုးတိုးလာလိမ့်မည်ဟုသင်ထင်ကြောင်းညွှန်ပြလိမ့်မည်။ တနည်းအားဖြင့်ဆိုလျှင်သင်သည် 'တိုသော' အမိန့်ကိုထားလျှင်ဆန့်ကျင်ဘက်ဟုသင်ထင်မြင်သည်။ သင်၏သက်ဆိုင်ရာအမှာစာမချမီ၊ အစုရှယ်ယာတစ်ခုယူရန်လည်းလိုအပ်သည်။
ပျံ့နှံ့သည့်အလောင်းအစားများလောကတွင်သင်၏ကုန်သွယ်မှုပမာဏကို 'per-per-point' အဖြစ်ဖော်ပြသည်။ ထို့နောက်သင်သည်မှန်ကန်သော (သို့) မမှန်ကန်သောအချက်တစ်ခုစီအတွက်သင်၏လောင်းကြေးကိုမြှောက်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ အကယ်၍ သင်သည် FTSE 1 ပေါ်တွင်တစ်ဒေါ်လာပေါင်နှုန်းထားပြီးကုန်သွယ်မှုကိုအမှတ် ၂၈၀၀ ဖြင့်ပိတ်ခဲ့လျှင်၎င်းသည်သင်£ ၁၀၀ အနိုင်ရလိမ့်မည်။
အကြောင်းမှာ FTSE 100 သည်အမှတ် ၁၀၀ (၂,၈၀၀ မှ ၂,၇၀၀) ပိုမိုမြင့်မားပြီးသင်၏အစုရှယ်ယာတစ်စုသည်ပေါင် ၁ ပေါင်ဖြစ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်တိုတိုတိုတိုတိုတိုတိုပြောလိုက်ရင်အကွာအဝေး ၁၀၀ မှာမှားနေတာကြောင့်စုစုပေါင်းအရှုံးဟာပေါင် ၁၀၀ ရှိလိမ့်မယ်။
အမြတ်အစွန်းများကို အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့် ပေးလေ့ရှိသည်။
ထောင်ပေါင်းများစွာသော ငွေကြေးကိရိယာများနှင့် ထိတွေ့မှုရရှိပါ။
သင့်ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုတွင် အရှည်နှင့် အတိုချုံ့ရန် ရွေးချယ်မှု။
လောင်းကစားပွဲစားများသည် ပုံမှန်အားဖြင့် ကော်မရှင်မပါဘဲ ကုန်သွယ်မှုကို ပေးဆောင်သည်။
margin မှတဆင့် သင့်အကောင့်တွင် သင့်အကောင့်တွင်ရှိသည်ထက် များစွာပို၍ အရောင်းအ၀ယ်လုပ်ပါ။
မင်းရဲ့ အလားအလာကို ကန့်သတ်မထားဘူး။
သမားရိုးကျ စတော့ ရောင်းဝယ်ရေးထက် အများကြီး အန္တရာယ်များတယ်။
ကုန်သွယ်မှုတစ်ခုတည်းတွင် သင့်ရှယ်ယာတစ်ခုလုံးကို သင်ဆုံးရှုံးနိုင်သည်။
ပျံ့နှံ့သည့်အလောင်းအစားသည်သင်၏ကုန်သွယ်မှုအပေါ်သင်ကျော် (သို့) အောက်ရှိအမှတ်အရေအတွက်အပေါ်အခြေခံပြီးသင်၏အမြတ်အစွန်း (သို့) ဆုံးရှုံးမှုသည်အချက်များစနစ်ပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်သည်။ ရှုပ်ထွေးလား ကောင်းပြီ၊ သင် Nike ၏ရှယ်ယာများကိုဒေါ်လာ ၈၅.၅၀ နှင့်ရောင်းစားနေသည်ဆိုပါစို့။ ပျံ့နှံ့လောင်းကစားအတွက်အသုံးအနှုန်းများအတွက်, $ 85.50 85.50 မှတ်သို့ဘာသာပြန်လိမ့်မယ်။ ထို့နောက်သင်“ ရှည်လျားစွာ” သွားသည်ဟုဆိုပါစို့၊ ဆိုလိုသည်မှာ Nike ၏စတော့များသည်တန်ဖိုးတိုးလာမည်ဟုသင်ထင်သည်။
အကယ်၍ သင်သည် Nike ကို ၈၇.၀ (ဒေါ်လာ ၈၇.၀၀) ဖြင့်စျေးနှုန်းသတ်မှတ်ချိန်တွင်သင်၏ကုန်သွယ်မှုကိုပိတ်လိုက်ပါကသင်၏ပျံ့နှံ့သောအလောင်းအစားကုန်သွယ်မှုကို ၁၅ မှတ်ဖြင့်အောင်မြင်သည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီဥပမာမှာ - အချက်တစ်ခုစီဟာစတော့ရှယ်ယာတက်တဲ့ $ 87.0 တိုင်းကိုအခြေခံတယ်။ ဒါကြောင့်တစ်ပေါင်ကို ၁ ပေါင်လောင်းမယ်ဆိုရင်အမြတ်အစွန်း ၁၅ ပေါင်နဲ့ ၁၅ ဆခွဲက ၁ ပေါင်ရှိမယ်။
ထိုနည်းတူစွာ အကယ်၍ သင်သည်တစ်ဒေါ်လာလျှင် ၅ ပေါင်စီလျှင်သင်၏ Nike စတော့ရှယ်ယာရောင်းဝယ်မှုသည်အမြတ် ၇၅ ပေါင် (၁၅ မှတ်မှ ၅ ပေါင်) ထိကျလိမ့်မည်။ အကယ်၍ သင်၏ပျံ့နှံ့သည့်အလောင်းအစားအရောင်းအ ၀ ယ်များသည်တစ်ခါတစ်ရံသင့်ကိုဆန့်ကျင်။ ဖြစ်နိုင်သည်။ တနည်းအားဖြင့် Nike စတော့ရှယ်ယာများ၏တန်ဖိုးသွားပြီ ဆင်းမင်းပိုက်ဆံဆုံးရှုံးမှာပဲ
ဥပမာအားဖြင့် Nike သည်ဒေါ်လာ ၈၂.၅၀ ဖြင့်စျေးနှုန်းဖွင့်သောအခါသင်ကုန်သွယ်မှုကိုရပ်ဆိုင်းခဲ့သည်ဆိုပါစို့။ ဤအချက်သည်ဆုံးရှုံးမှုကိုအချက် ၃၀ (၈၅.၅ မှ ၈၂.၅) အဖြစ်သို့ရောက်သောအခါ£ 82.50 ရှယ်ယာတစ်ခုသည်သင့်အား£ 30 ဆုံးရှုံးလိမ့်မည်။ အမှန်မှာ၊ အရောင်းအ ၀ ယ်လောင်းခြင်းများတွင်သင်ဆုံးရှုံးနိုင်သည့်ပမာဏကိုကန့်သတ်ချက်မရှိပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ပထမဥပမာတွင်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ရေနံအရောင်းအဝယ်ဖြစ်လိမ့်မည်။ တစ်စည်လျှင် $28.0 ရှိသည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့ထင်သည်။ ကုန်စည် အလွန်အဖိုးတန်သည်။ OPEC နှင့် Russia တို့၏ ထုတ်လုပ်မှု လျော့ချရေး ကောလာဟလများ ကြောင့် သင်သည် ကြာရှည်ရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ရေနံစျေးနှုန်းသည် ၎င်း၏လက်ရှိပေါက်စျေး $28.0 – သို့မဟုတ် 28.0 မှတ်နှင့် ယှဉ်လျှင် တက်လာမည်ဟု ထင်ပါသည်။
မင်းက ရေနံတစ်မှတ်ကို ၅ ပေါင်နဲ့ ကြာကြာအော်ဒါတင်လိုက်တယ်။
ဆိုလိုသည်မှာ ရေနံတန်ဖိုးတက်သည် သို့မဟုတ် ကျဆင်းသွားသည့် အမှတ်တိုင်း (သို့မဟုတ် $.10) အတွက် သင်သည် £5 အနိုင်ရမည် သို့မဟုတ် ဆုံးရှုံးသွားမည်ဖြစ်သည်။
နာရီအနည်းငယ်အကြာတွင် ရေနံသည် 33.50 ဒေါ်လာ သို့မဟုတ် 33.50 မှတ်အထိ တက်လာသည်။
ဒါက ၅၅ မှတ် နောက်ထပ် သင်မှာယူသောအခါ ၂၈.၀ ရမှတ်ထက်ပိုသည်။ သတိပြုပါကအချက်များသည်ဒdecimalမအမှတ်ပြီးနောက်နံပါတ်ပေါ်အခြေခံသည်။
ထို့ကြောင့်သင်သည်ဤကုန်သွယ်မှုတွင်ပေါင် ၂၇၅ ကိုအနိုင်ရခဲ့သည်။
အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် £55 ၏ အစုရှယ်ယာတစ်ခုနှင့် ယှဉ်လျှင် သင်နှစ်သက်သော5မှတ်သည် £275 ဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။
အစောပိုင်းကဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း၊ အလောင်းအစားများအရောင်းအ ၀ ယ်များသည်သင်၏မျက်နှာသာရရန်အမြဲတမ်းရှိလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ၊ ထို့ကြောင့်ယခုကျွန်ုပ်တို့မအောင်မြင်သောနမူနာကိုကြည့်ဖို့လိုသည်။
ရိုးရှင်းစွာထားရန်၊ ရေနံကိုဒေါ်လာ ၂၈.၀ နှင့် ၂၈.၀ မှတ်ဖြင့်အထက်တွင်ဖော်ပြထားသောဥပမာအတိုင်းကျွန်ုပ်တို့လိုက်နာရမည်။ ဒီတစ်ကြိမ်တည်းမှာပဲအရာရာစီစဉ်ဖို့မသွားဘူး
နာရီအနည်းငယ်ကြာသောအခါ ရေနံသည် $26.00 သို့မဟုတ် 26.0 မှတ်အထိ ပျက်သွားသည်။
မူရင်းစျေးနှုန်းသည် 28.0 မှတ်ဖြစ်သောကြောင့်၊ ၎င်းသည် လက်ရှိတွင် 26.0 ဖြစ်သည် - ၎င်းသည် အမှတ် 20 ဆုံးရှုံးသွားသည်ဟု ဘာသာပြန်ဆိုသည်။
ထို့ကြောင့် သင်သည် ဤကုန်သွယ်မှုတွင် £100 ဆုံးရှုံးခဲ့သည်။
အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် အမှတ် 20 မှ £5 ၏ရှယ်ယာတစ်ခုတွင်သင်နှင့်ယှဉ်ပါက £100 ဆုံးရှုံးမှုဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။
၎င်းသည်ပြန့်နှံ့သောအလောင်းအစားများနှင့်သင်ပြုလုပ်သည့်အခါပိုက်ဆံဆုံးရှုံးရန်မည်မျှလွယ်ကူကြောင်းအဓိကဥပမာတစ်ခုဖြစ်သည်။ တစ်ဖက်မှကြည့်လျှင်သင့်တော်သော stop-loss order ကိုတပ်ဆင်ခြင်းဖြင့်သင်၏အန္တရာယ်များကိုအလွယ်တကူလျှော့ချနိုင်သည်။ နောက်ကျသောအသေးစိတ်အချက်အလက်များအရစျေးကွက်များသည်ကြိုတင်သတ်မှတ်ထားသောရာခိုင်နှုန်းဖြင့်သင့်ကိုဆန့်ကျင်သောအခါသင်၏ကုန်သွယ်မှုမှအလိုအလျောက်ထွက်ရန်ခွင့်ပြုသည်။
CFD များနှင့်ဆင်တူသည်မှာပြန့်နှံ့သောအလောင်းအစားပွဲစားများကသင့်အားထောင်ပေါင်းများစွာသောငွေကြေးစျေးကွက်များသို့ဝင်ခွင့်ပေးသည်။ ဤသည်ကသင်သည်တစ်နေ့လျှင် ၂၄ နာရီ - အမျိုးမျိုးသောပိုင်ဆိုင်မှုအစုစုကိုဖန်တီးနိုင်မည်ကိုသေချာစေသည်။
စတော့ရှယ်ယာများ: ထောင်ပေါင်းများစွာသောအပြာရောင်ချစ်ပ်ရှယ်ယာများကိုစျေးကွက်နေရာများစွာသို့ဖြန့်နိုင်သည်။ LSE, NASDAQ နှင့် NYSE တို့၏လိုင်းများတစ်လျှောက်စဉ်းစားပါ။
Indicator: ပိုမိုကျယ်ပြန့်သောစတော့စျေးကွက်များကိုသင်ရောင်းလိုပါကအလောင်းအစားပလက်ဖောင်းများကိုညံ့ဖျင်းစေနိုင်သည်။ ၎င်းတွင် S&P 500, Dow Jones, FTSE 100 နှင့် NASDAQ 100 တို့ပါဝင်သည်။
စွမ်းအင်များ - သင်တို့သည်လည်းစွမ်းအင်ကုန်သွယ်နိုင်ပါတယ်။ ၎င်းတွင်အဓိကရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့စျေးကွက်များပါဝင်သည်။
မာကြောသောသတ္တုများ: မာကျောသောသတ္တုနေရာများတွင်ရွှေ၊ ရေနံနှင့်ကြေးနီတို့ပါဝင်သည်။
စိုက်ပျိုးရေး ဂျုံ၊ ကောက်ပဲသီးနှံ၊ သကြားနှင့်စပါးကဲ့သို့သောစိုက်ပျိုးရေးထုတ်ကုန်များနှင့်ထိတွေ့လိုလျှင်ဤစျေးကွက်များကိုပုံမှန်အားဖြင့်ထောက်ပံ့သည်။
ETF များ လောင်းနိုင်သောပလက်ဖောင်းများမည်မျှကျယ်ပြန့်ကြောင်း ထပ်မံ၍ မီးမောင်းထိုးပြ - သင် ETFs များကိုလည်းရောင်းဝယ်နိုင်သည်။
ငွေကြေး: forex အရောင်းအ၀ယ်ဆိုက်များနှင့်ဆင်တူသောသဘောအရ၊ ဖြန့်ကြက်ထားသော လောင်းကစားပွဲစားများသည်လည်း လူကြိုက်များသောငွေကြေးအတွဲများကဲ့သို့သော အနာဂတ်ဦးတည်ချက်အပေါ် မှန်းဆနိုင်စေပါသည်။ GBP / အမေရိကန်ဒေါ်လာ နှင့် EUR / အမေရိကန်ဒေါ်လာ.
Cryptocurrencies- အချို့ပျံ့နှံ့သည့်အလောင်းအစားက်ဘ်ဆိုက်များသည်သင့်အား Bitcoin နှင့် Ethereum ကဲ့သို့ကျော်ကြားသော cryptocurrencies ၏အနာဂတ်တန်ဖိုးကိုလဲကုန်သွယ်ရန်ခွင့်ပြုသည်။
ပျံ့နှံ့လောင်းခြင်း - အဓိကသတ်မှတ်ချက်များ
ပထမဆုံးနှင့်အရေးကြီးဆုံး - သင်၏ဘောင်းဘီတိုများမှသင်လိုချင်သောတာရှည်များကိုသိရန်သေချာစေပါ။ အစောပိုင်းကကျွန်ုပ်တို့တိုတိုတုတ်တုတ်ပြောခဲ့သည့်အတိုင်းစျေးကွက်တစ်ခုသို့ရှည်လျားစွာသွားခြင်းသည်သင်ပိုင်ဆိုင်မှုသည်ထင်လိမ့်မည်ဟုဆိုလိုသည် တိုးမြှင့်လာသည် စျေးနှုန်းအတွက်။ ၎င်းသည် CFD အရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်ရာတွင် '၀ ယ်ခြင်း' အမိန့်ပေးခြင်းသို့မဟုတ်ရွေးချယ်မှုစာချုပ်တစ်ခုတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသောအခါ 'ခေါ်ဆိုမှုရွေးစရာ' နှင့်အတူတူပင်ဖြစ်သည်။
အကယ်၍ သင်သည်ပျံ့နှံ့သည့်အလောင်းအစားဈေးကွက်တွင်တိုတောင်းလျှင်၎င်းသည်ပိုင်ဆိုင်မှုတန်ဖိုးကျလိမ့်မည်ဟုသင်ဆိုလိုသည်။ ထပ်မံ၍ CFD များအရောင်းအ ၀ ယ်လုပ်သည့်အခါ“ sell” အမိန့်တစ်ခုသို့မဟုတ်“ put option” နှင့်တူညီသည် ရွေးချယ်စရာကုန်သွယ် အာကာသ။
ပျံ့နှံ့သည့်အလောင်းအစားပလက်ဖောင်းများသည်သင့်အကောင့်ထဲရှိအမှန်တကယ်ငွေများထက်သင်နှင့်ပိုမိုကုန်သွယ်ရန်ခွင့်ပြုသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ မင်းကဒစ္စနေးစတော့ရှယ်ယာတွေကိုဒေါ်လာ ၁၀၀၀ ၀ ယ်ချင်တယ်ဆိုပါစို့။ သာမန်အားဖြင့် အကယ်၍ သင်သည်အွန်လိုင်းစတော့အိတ်ချိန်းသူနှင့်ရှယ်ယာပေါင် ၁၀၀၀ တန်ဝယ်ယူလျှင်ရှယ်ယာပေါင် ၁၀၀၀ ရရှိလိမ့်မည်။
သို့သော်ဖြန့်ဝေသည့်လောင်းကစား ၀ က်ဘ်ဆိုက်များသည်သင်၏ကုန်သွယ်မှုကိုသြဇာသက်ရောက်စေရန်ခွင့်ပြုသည်။ ထို့ကြောင့်သင်၏ပေါင် ၁၀၀၀ ရှိသောလက်ကျန်ငွေသည်သိသိသာသာပိုမိုကုန်သွယ်ရန်ခွင့်ပြုလိမ့်မည်။
အရောင်းအ၀ယ်လုပ်ရန်အတွက် 10% margin ကို ချရန်သာ လိုအပ်သည်ဟု ဆိုကြပါစို့ Disney တွေလဲ.
သင်၏ အရောင်းအ၀ယ်သည် သင့်အား သတ်မှတ်ထားသော ပမာဏတစ်ခုဖြင့် ဆန့်ကျင်ပါက ပွဲစားမှ သိမ်းဆည်းရန် သင့်အနားသတ်သည် အဓိကအားဖြင့် ပြန်မအမ်းနိုင်သော အပ်ငွေဖြစ်သည်။
သင့်အကောင့်တွင် £1,000 ရှိပြီး £10,000 တန်ဖိုးရှိသော Disney စတော့များကို ရောင်းဝယ်နိုင်စေပါသည်။
အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် စတာလင်ပေါင် 1,000 သည် လိုအပ်သောအနားသတ်၏ 10% ဖြစ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
အရေးကြီးသည်မှာ margin ကိုအရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်ခြင်းသည်နည်းလမ်းနှစ်ခုအနက်မှတစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်၏ပျံ့နှံ့သည့်အလောင်းအစားကုန်သွယ်မှုကိုသင်အနိုင်ရပြီးသင်၏နိုင်ငွေကိုတိုးမြှင့်နိုင်သည်။
ဥပမာအားဖြင့်၊ အကယ်၍ သင်သည် Disney ၏ရှယ်ယာများကိုကြာမြင့်စွာလေ့လာခဲ့ပြီးစျေးနှုန်းသည် ၂၀% တိုးတက်ခဲ့သည်ဆိုလျှင်စုစုပေါင်းအမြတ်ငွေပေါင် ၂၀၀ (ပေါင် ၁၀၀၀ ၏ ၂၀%) ရလိမ့်မည်။ သို့သော်သင်သည်သြဂုတ် ၁၀: ၁ ကိုအသုံးပြုသည်နှင့်အမျှသင်၏အမြတ်မှာပေါင် ၂,၀၀၀ (ပေါင် ၂၀၀ နှင့် ၁၀) ဖြစ်သည်။
အကယ်၍ စျေးကွက်များကအခြားတစ်ဖက်သို့သွားလျှင်၊ Disney ၏စတော့ဈေးကွက်သည် ၁၀% ကျဆင်းသွားပါကသင်၏အနိမ့်ဆုံးဆုံးရှုံးသွားလိမ့်မည်။ ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်, ကုန်သွယ်ရေးဖျက်သိမ်းခဲ့ကြခြင်းနှင့်ပွဲစားသင့်ရဲ့£ 10 အနားသတ်ထားရှိမည်လိမ့်မယ်။
အများကြီးနဲ့တူ အခြား ဘဏ္marketsာရေးစျေးကွက်များ၌ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလမ်းကြောင်းတစ်ခု၊ အွန်လိုင်းလောင်းကစားများပျံ့နှံ့သောအခါသင်“ ပြန့်ပွားခြင်း” ကိုအခိုင်အမာဆုပ်ကိုင်ထားရမည်။ သတိမထားမိသူများအတွက်၎င်းသည်ပစ္စည်းတစ်ခု၏ရောင်း ၀ ယ်ခြင်းနှင့်ကွာခြားမှုဖြစ်သည်။ ပျံ့နှံ့ခြင်းလောင်းကစားခြင်းတွင်၎င်းသည် 'ရှည်' သော 'တိုသော' ၀ င်ငွေစျေးနှုန်းနှင့်ကွာခြားသည်။ ၎င်းသည်အမြဲတမ်းအချက်များဖြင့်ဖော်ပြသည်။
အရှည်က $27.0 ဖြစ်ပါတယ်။
အတိုချုံးစျေးနှုန်းမှာ $27.3 ဖြစ်ပါတယ်။
၎င်းသည် 30% ကျော်သာရှိသော အမှတ် 1 ၏ ကွာခြားချက်ဖြစ်သည်။
အထက်ပါဥပမာအရဆိုပါကသင်၏ပြန့်ပွားခြင်းလောင်းခြင်းအရောင်းအဝယ်ကိုပင်အနည်းဆုံးအမှတ် (၃၀) (၁.၁၁%) ရရှိရန်လိုအပ်သည်ဟုဆိုလိုသည်။ ဒီဟာစျေးကြီးတယ်
သတင်းကောင်းမှာဤစာမျက်နှာတွင်ဖော်ပြထားသောပျံ့နှံ့သည့်အလောင်းအစားပွဲစားများသည်ပြန့်ပွားမှုကိုကမ်းလှမ်းသည် သိသိသာသာ ဒီထက်ပိုမိုယှဉ်ပြိုင်မှု။
အလောင်းအစားပျံ့နှံ့ခြင်းမစတင်မီသင်၏အလောင်းအစားကာလကိုအကဲဖြတ်ရန်လိုသည်။ နာမည်ကဖော်ပြသည့်အတိုင်း၎င်းသည်သင်၏လောင်းကြေးကြာချိန်ကိုသာဆိုလိုသည်။ ၎င်းသည်ပုံမှန်အားဖြင့်ပုံစံနှစ်မျိုးအနက်မှတစ်ခု - နေ့စဉ်ငွေကြေးထောက်ပံ့ခြင်း (သို့မဟုတ်) သုံးလတစ်ကြိမ်လောင်းခြင်းဖြစ်သည်။
နေ့စဉ်ငွေကြေးထောက်ပံ့မှု - ဤအလောင်းအစားသည်အထူးသဖြင့်သင်ပါဝင်လိုသူများအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည် တစ်ရက်ကုန်သွယ်။ အကြောင်းမှာသင်ပျံ့နှံ့နေသည့်အလောင်းအစားကုန်သွယ်မှုကိုပွင့်ပွင့်လင်းလင်းထားရှိရန်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းငွေကြေးအခကြေးငွေပေးရလိမ့်မည်။ နောက်ဆုံးတွင်စျေးနှုန်းချိုသာသောပျံ့နှံ့သည့်အလောင်းအစားဆိုက်တစ်ခုကိုအသုံးပြုသည့်အခါသင်အမြဲတမ်းကုန်သွယ်မှုပြုလိမ့်မည်။ ပြန့်ပွားသူတို့ရဲ့နိမ့်ဆုံးမှာမကြာခဏဖြစ်ကြသည်။
လပတ်အလောင်းအစား: သုံးလတစ်ကြိမ်အလောင်းအစားသည်ရေရှည် အခြေခံ၍ ကုန်သွယ်မှုကိုဖွင့်ထားလိုသောသင်နှင့် ပို၍ သင့်တော်သည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မင်းကကုန်သွယ်ရေးကိုအမြဲဖွင့်ထားသည့်နေ့ရက်တိုင်းအတွက်အလွန်အမင်းအခကြေးငွေမပေးရသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်သင်၏ပျံ့နှံ့သည့်အလောင်းအစားကုန်သွယ်မှုကိုအလိုအလျှောက်မပိတ်မှီ ၃ လအထိပွင့်လင်းစွာထားနိုင်သည်။ ပြန့်ပွားမကြာခဏပိုမိုမြင့်မားဖြစ်ကြသည်။
အလောင်းအစားများပျံ့နှံ့သောအခါသင်ရင်ဆိုင်ရမည့်အကြီးမားဆုံးစွန့်စားမှုမှာသင်၏ကုန်သွယ်မှုအားဖျက်သိမ်းခြင်းဖြစ်သည်။ အစောပိုင်းကမည်သို့လုပ်ဆောင်ခဲ့ပုံကိုကျွန်ုပ်တို့အတိုချုပ်ဖော်ပြသော်လည်း၊ ကျွန်ုပ်တို့ချဲ့ထွင်ရန်အရေးကြီးသည်။ နောက်ဆုံးတွင်ဖျက်သိမ်းခံရသောကုန်သွယ်မှုသည်သင်၏အကုန်လုံးဆုံးရှုံးမှုကိုဖြစ်စေလိမ့်မည်။
ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပထမ ဦး ဆုံးလုပ်ရမှာကရာခိုင်နှုန်းဘယ်လောက်ရမယ်ဆိုတာကိုအကဲဖြတ်ဖို့ပါ။
ဥပမာအားဖြင့်၊ သင်သည် margin လိုအပ်ချက် 10% ရှိသော Apple စတော့များကို ရောင်းဝယ်နေသည် ဆိုကြပါစို့။
သင်သည် £5,000 တန်သောစတော့ရှယ်ယာများကို ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားလိုသည်၊ ဆိုလိုသည်မှာ သင်သည် စတာလင်ပေါင် 500 ကိုထည့်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
ကုန်သွယ်မှုဖွင့်ထားသရွေ့၊ ၎င်းကို သင်၏ပင်မအကောင့်လက်ကျန်မှထုတ်ယူပြီး သင်၏အနားသတ်အကောင့်ထဲသို့ ထည့်ထားသောကြောင့် ဤပေါင် 500 ကို သင်မထိနိုင်ပါ။
တစ်ဖက်မှာပေါင် ၅၀၀ လောက်ပဲချထားလိုက်ရင်သင်ဟာပေါင် ၅၀၀၀ တန် Apple စတော့ရှယ်ယာတွေရောင်းဝယ်ဖောက်ကားနိုင်တယ်ဆိုတာကောင်းပါတယ်။ အကယ်၍ စျေးကွက်များကသင့်ကိုဆန့်ကျင်နေလျှင်၊ ပေါင် ၅၀၀ လုံးလုံးဆုံးရှုံးသွားနိုင်ခြေရှိသည်။ တကယ်တော့အက်ပဲလ်ရဲ့စျေးနှုန်းက ၁၀% ကျသွားမယ်ဆိုရင်ဒါကတကယ်ဖြစ်လာနိုင်တာပဲ။ ဒါကတကယ့်ကမ္ဘာ့ပေါင် ၅၀၀ လျှော့ချမယ်။
သင်ဖျက်သိမ်းသည့်အဆင့်သို့မရောက်မီ၊ သင်၏အလောင်းအစားစာရင်းတွင်ငွေထပ်မံဖြည့်စွက်ရန်အတွက်ပြန့်ပွားသောလောင်းကစားပွဲစားကသင့်အားပေးလိမ့်မည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ အကယ်၍ သင်နောက်ထပ်ပေါင် ၂၀၀ ကိုထပ်မံဖြည့်ပါက၎င်းသည် Apple စတော့ရှယ်ယာများ၏ဈေးနှုန်းကိုကျဆင်းသွားစေနိုင်သည် အပိုဆောင်း သင်၏ကုန်သွယ်မှုကိုမပိတ်ခင်£ 200 ။
တစ်ဖက်တွင် အကယ်၍ သင်သည်သင်၏ပမာဏကိုရန်ပုံငွေထပ်မံထည့်ရန်မရွေးချယ်ပါကသင်၏အက်ပဲလ်ကုန်သွယ်မှုမှ ၁၀% ဖျက်သိမ်းမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေပါကပွဲစားသည်သင်၏ကုန်သွယ်မှုကိုပိတ်သိမ်းပြီးသင်၏ပေါင် ၅၀၀ အနားသတ်ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းလိမ့်မည်။
သတင်းကောင်းမှာသင်သည်မည်သည့်အခါမျှဖျက်သိမ်းခံရခြင်းမရှိစေရန်သေချာစေရန် stop-loss အမိန့်ကိုတပ်ဆင်နိုင်သည်။ ယင်းအစား၊ သင်၏ပိုင်ဆိုင်မှုသည်သေးငယ်သည့်ပမာဏဖြင့်သင့်ကိုဆန့်ကျင်သောအခါသင်၏ပျံ့နှံ့သည့်အလောင်းအစားကုန်သွယ်မှုမှထွက်ရန်ရွေးချယ်နိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ သင်၏ကုန်သွယ်မှုကို ၁၀% နှုန်းဖြင့်သင်၏ကုန်သွယ်ရေးကိုပိတ်ပစ်မည့်အစားသင်၏ရပ်နားမှုဆုံးရှုံးမှုအမိန့်ကို ၂% တွင်ထားနိုင်သည်။
Apple စတော့ရှယ်ယာများနှင့် တွဲလျက်၊ လက်ရှိ ကာလရှည်စျေးနှုန်းမှာ $250.0 ဖြစ်သည် - အမှတ် 250.0 ရှိသည် ဆိုကြပါစို့။
သင်သည် £10 ရှယ်ယာနှင့် £1,000 ကုန်သွယ်မှုပမာဏရှိသော 10,000% margin ဖြင့် အရောင်းအဝယ်လုပ်နေပါသည်။
ဒါပေမယ့် မင်းရဲ့ဆုံးရှုံးမှုကို 2% ကန့်သတ်ထားချင်တယ်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ရပ်တန့်-ဆုံးရှုံးမှု မှာယူမှုစျေးနှုန်းကို ရရှိရန်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် လက်ရှိ ရှည်လျားသော စျေးနှုန်း2အမှတ်မှ 250.0% ကို နုတ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။
အမှတ်2၏ 250.0% သည် 5.0 ရမှတ်ဖြစ်သည်၊ ထို့ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ stop-loss အစီအစဉ်ကို 245.0 မှတ်တွင် ထားရှိမည်ဖြစ်သည်။
အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းအဆိုးဆုံးမြင်ကွင်းမှာ Apple ၏အစုရှယ်ယာ ၂ ရာခိုင်နှုန်းကျဆင်းသွားခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုသို့ဖြစ်ခဲ့လျှင်၊ သင်သည်ပေါင် ၂၀၀ ဆုံးရှုံးပြီးကုန်သွယ်မှုကိုပိတ်လိမ့်မည် (ကုန်သွယ်မှုပမာဏပေါင် ၁၀၀၀၀ ၏ ၂%) ။ သင်ငွေပျောက်နေဆဲဖြစ်သော်လည်း stop-loss အမိန့်မှာမရှိသေးသော်လည်းသင်၏ပေါင်စတာလင်တစ်ခုလုံးဆုံးရှုံးသွားနိုင်သည်။ ပေါင် ၁၀၀၀ ဖြစ်သည်။
ရိုးရာစတော့များနှင့်မတူဘဲ CFDs သို့မဟုတ် Forex - spread လောင်းကစားအမြတ်များသည်များသောအားဖြင့်အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်ရသည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီလုပ်ငန်းကိုသမားရိုးကျရောင်းဝယ်မှုနဲ့ဆန့်ကျင်သလိုလောင်းကစားလို့မြင်ကြလို့ပဲ။
ဥပမာအားဖြင့် အကယ်၍ သင်သည်လောင်းကစားပွဲများတွင်အနိုင်ရရှိသည့်အခွန်အကောက်ကင်းလွတ်သည့်နိုင်ငံတွင်နေထိုင်ပါကပြန့်ပွားလောင်းကစားခြင်းနှင့်လည်းသက်ဆိုင်နိုင်သည်။ သို့သော်သင်၏သက်ဆိုင်ရာတိုင်းပြည်ရှိအခွန်ကျွမ်းကျင်သူနှင့်စစ်ဆေးရန်သင့်အားပြင်းပြင်းထန်ထန်အကြံပေးပါသည်။
ဤအချက်နှင့်ပါတ်သက်ပြီးကျွန်ုပ်တို့၏လမ်းညွှန်ကိုဖတ်ပြီးလျှင်ရေရှည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရည်မှန်းချက်များအတွက်ပျံ့နှံ့ခြင်းလောင်းကစားခြင်းသည်မှန်ကန်သည်ဟုသင်ထင်လျှင် - ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့စတင်ရန်သင်ဘာလုပ်ရမည်ကိုသင်ပြတော့မည်။
အဆင့် ၁ - ပျံ့နှံ့လောင်းကစားပွဲစားကိုရှာပါ
သင်အလောင်းအစားအွန်လိုင်းကိုပျံ့နှံ့လိုပါကသင့်တော်သောပွဲစားကိုရှာရန်လိုအပ်လိမ့်မည်။ ပျံ့နှံ့သည့်အလောင်းအစားပလက်ဖောင်းအများစုသည် CFDs များကိုလည်းအထောက်အပံ့ပေးသောကြောင့်သင်ကဟိုက်ဘရစ်ဆိုက်ကိုအသုံးပြုလိမ့်မည်။
မည်သို့ပင်ဆိုစေကာ၊ အွန်လိုင်းနယ်ပယ်တွင်ပျံ့နှံ့ထားသောအလောင်းအစားများစွာသောဝက်ဘ်ဆိုက်များတက်ကြွစွာဖြင့်ပလက်ဖောင်းသည်သင့်အတွက်မှန်ကန်ကြောင်းသေချာစေရန်လိုအပ်သည်။ ၎င်းတွင်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ၊ ငွေပေးချေမှုနည်းစနစ်များ၊ ကုန်သွယ်ရေးကိရိယာများ၊ အခကြေးငွေများနှင့်ဖောက်သည်များ၏ပံ့ပိုးမှုများစသည့်မက်ထရစ်များပါဝင်သင့်သည်။
လမ်းတစ်လျှောက်၌သင့်အားကူညီရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ထိပ်ဆုံးငါးခုကိုစာရင်းပြုစုထားသည် လောင်းကစားပွဲစားများကိုဖြန့်ဝေ ဒီစာမျက်နှာ၏အောက်ဆုံးဆီသို့ 2022 ၏။
သင်၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သည့်ပျံ့နှံ့လောင်းကစားခြင်းပလက်ဖောင်းတစ်ခုကိုသင်တွေ့ရှိပြီးပါကသင် account တစ်ခုဖွင့်ရန်လိုအပ်သည်။ အခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ၀ ဘ်ဆိုဒ်များကဲ့သို့ပင်လုပ်ငန်းစဉ်သည်သင့်ထံမှပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်အချို့လိုအပ်လိမ့်မည်။
အဆင့် 3: အထောက်အထားအတည်ပြုရန်
သင်၏ပထမဆုံးပြန့်ပွားလောင်းခြင်းကုန်သွယ်ခြင်းကိုမပြုလုပ်မီ၊ သင်သည်မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်းအတည်ပြုရန်လိုအပ်သည်။ များသောအားဖြင့်သင်သည်သင်၏နိုင်ငံကူးလက်မှတ်သို့မဟုတ်ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်၏ရှင်းလင်းသောမိတ္တူတစ်ခုကိုလျင်မြန်စွာတင်ခြင်းအားဖြင့်၎င်းကိုသင်လုပ်နိုင်သည်။
အချို့ပွဲစားများသည်လိပ်စာအထောက်အထားကိုတောင်းလိမ့်မည်။ အကယ်၍ ၎င်းတို့ပြုလုပ်ပါကသင်သည်မကြာသေးမီကဘဏ်အကောင့်ထုတ်ပြန်ချက်သို့မဟုတ်အသုံးအဆောင်ငွေတောင်းခံလွှာကိုအပ်လုပ်လုပ်နိုင်သည်။
သင်၏ပျံ့နှံ့သည့်လောင်းကစားအကောင့်ကိုရန်ပုံငွေတောင်းခံရန်သင့်အားတောင်းဆိုလိမ့်မည် များသောအားဖြင့်ပလက်ဖောင်းအများစုသည်သင့်အားအနည်းဆုံးငွေပမာဏကိုပေါင် ၅၀ မှ ၁၅၀ အထိရရှိရန်တောင်းဆိုလိမ့်မည်။
လှမ်း ၅: အလွှာအလောင်းအစားကုန်သွယ်မှုကိုနေရာချပါ
သင်ငွေသွင်းပြီးသည်နှင့်သင်၏ပထမဆုံးပြန့်နှံ့သည့်လောင်းကစားကုန်သွယ်မှုကိုပြုလုပ်နိုင်သည်။ ပွဲစားမှကမ်းလှမ်းသောကျယ်ပြန့်သောအလောင်းအစားစျေးကွက်များကိုသင်ကြည့်ရှုနိုင်သည်၊ သို့မဟုတ်ရှာဖွေရန်အကွက်ထဲသို့ဘဏ္instrumentာရေးတူရိယာကိုသာရနိုင်သည်။
အရှည် သို့မဟုတ် အတိုတစ်ခုမှ ရွေးပါ။
ရပ်တန့်-ဆုံးရှုံးမှု အမှာစာအစပျိုးစျေးနှုန်းကို ရွေးချယ်ပါ။
သင်၏အရောင်းအ ၀ ယ်ကိုထားပါ။
သင်၏ကုန်သွယ်မှုသည်သက်တမ်းကုန်သွားသည်နှင့်တပြိုင်နက်ဆန့်ကျင်ဘက်အမိန့်အားဖြင့်၎င်းကိုမည်သည့်နေရာတွင်မဆိုပိတ်နိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ အကယ်၍ သင်သည်ရှည်လျားစွာသွားပါကကုန်သွယ်ရေးနှင့်ဗီဇာကိုအပြန်အလှန်ပိတ်ရန်အတိုချုပ်နေရာချပါ။
ယူကေတွင်လောင်းကစားခြင်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်ခြင်းကဲ့သို့သောလောင်းကစား ၀ ယ်ခြင်းများရှိသည် လောင်းကစားဆိုဒ်အသစ်များ ၂၀၂၁ အတွက်လောင်းကစားဆိုဒ်အသစ်အားလုံးကိုဖော်ပြသည်။
လောင်းကစားစတင်ခြင်းကိုယခုအချိန်တွင်စတင်ကစားလိုသော်လည်းမည်သည့်နေရာတွင်အသုံးပြုရမည်ကိုသေချာမသိပါ။ အောက်တွင် ၂၀၂၀ ၏ထိပ်ဆုံးပြန့်နှံ့သည့်လောင်းကစားဆိုက် ၅ ခုကိုသင်အောက်တွင်တွေ့လိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထိပ်တန်းရွေးချယ်မှုအားလုံးသည်အလွန်အမင်းစည်းမျဉ်းများချမှတ်ထားသည်။ ထောင်ပေါင်းများစွာသောဘဏ္instrumentsာရေးတူရိယာများကိုသင့်အားလက်လှမ်းမီစေပြီး၊ သင်သည်ဒက်ဘစ်နှင့်ခရက်ဒစ်ကဒ်ဖြင့်ရန်ပုံငွေများကိုလွယ်ကူစွာငွေသွင်းနိုင်သည်။
၁။ IG - အကောင်းဆုံးအနှံ့အပြားအလောင်းအစားပွဲစား
ကျွန်ုပ်တို့၏ထိပ်တန်းရွေး IG ကိုသွားသည်။ ၁၉၇၄ ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့သည် - ယူကေအခြေစိုက်ပွဲစားသည် CFD များ၊ Forex နှင့်လောင်းကစားအရောင်းအ ၀ ယ်များကိုကမ်းလှမ်းသည်။ တကယ်တော့စျေးကွက် ၁၇,၀၀၀ ကျော်ကိုသင်ရရှိနိုင်ပါတယ်၊
ထို့ကြောင့်၊ သင်လောင်းကြေးငွေများ၊ စတော့များ၊ အညွှန်းများနှင့်ရွှေတို့ကိုဖြန့်ရန်ကြိုးစားနေသည်ဖြစ်စေ IG သည်သင့်အတွက်စျေးကွက်တစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။ အနည်းဆုံးအပ်ငွေများသည်ပေါင် ၂၅၀ မှစတင်သည်။ သင်သည်သင်၏အကောင့်ကို debit / credit card သို့မဟုတ် bank account ဖြင့်ငွေထည့်နိုင်သည်။ စင်ကာပူနှင့်သြစတြေးလျရှိလိုင်စင်ရအဖွဲ့များကဤစင်မြင့်ကိုထိန်းချုပ်သည်။
ဖွင့် 0.3 pips မှာရွှေအရောင်းအပြောက်
အနည်းဆုံးသိုက်ပေါင် ၂၅၀ ရှိပါသလား
၂။ Spreadex - ငွေရေးကြေးရေးစျေးကွက်နှင့်အားကစားများတွင်လောင်းကစားခြင်း
တစ်ဦးချင်းပျံ့နှံ့လောင်းကစားကိရိယာ 10,000 ကျော်ဖြင့်၊ ပိုင်ဆိုင်မှုအတန်းအများစုကို အကျုံးဝင်ပါသည်။ တစ်မှတ်လျှင် 10p မျှသာ ရှိသော လောင်းကြေးကို သင် ဖြန့်နိုင်ပြီး အနည်းဆုံး အပ်ငွေ £1 မှ စတင်ပါသည်။ ငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းများစွာကို ပံ့ပိုးထားပြီး ပွဲစားသည် UKs FCA နှင့် လိုင်စင်ရရှိထားသည်။
ရုံ£ 1 ၏အနည်းဆုံးသိုက်
၃။ City Index - အကောင်းဆုံးပျံ့နှံ့နိုင်သောအလောင်းအစားကုန်သွယ်မှုပလက်ဖောင်း
IG ကဲ့သို့ပင် City Index သည် CFDs၊ Forex နှင့်အလောင်းအစားများကိုပြန့်ပွားစေသောရည်ရွယ်ချက်မျိုးစုံပွဲစားတစ်ယောက်ဖြစ်သည်။ သင်စျေးကွက် ၈၀၀၀ ကျော်ကို ၀ င်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပြီးပြန့်ပွားမှုသည်အလွန်ပြိုင်ဆိုင်နိုင်သည်။
ယူကေအခြေစိုက်ပွဲစားသည်မျက်နှာစာများစွာတွင်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများချမှတ်ထားသည်။ ၎င်းသည် ၁၉၈၃ ခုနှစ်မှစတင်၍ ရှည်လျားသောဂုဏ်သိက္ခာရှိသည်။ သင်မိနစ်ပိုင်းအတွင်းစာရင်းဖွင့်နိုင်သည်၊ အပ်ငွေသည်ပေါင် ၁၀၀ မှစတင်သည်၊ ငွေပေးချေမှုနည်းစနစ်များတွင်ငွေသွင်း / ခရက်ဒစ်သို့မဟုတ် ဘဏ်ငွေလွှဲ
၄။ CMC Markets များ - စွန့်စားမှုစီမံခြင်းကိရိယာများဖြင့်လောင်းကစားပွဲစားကိုပျံ့နှံ့စေသည်
CMC Markets သည်အလွန်ကျယ်ပြန့်သောကျယ်ပြန့်သောအလောင်းအစားလောင်းကစားခြင်းကိုပြုလုပ်သည်။ ၎င်းတွင်စတော့ရှယ်ယာများ၊ ညွှန်းကိန်းများ၊ ETFs၊ စွမ်းအင်များ၊ ခဲယဉ်းသောသတ္တုများနှင့် cryptocurrencies များရှိထောင်ပေါင်းများစွာသောစျေးကွက်များပါ ၀ င်သည်။ ၁၉၈၉ ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး CMC Markets ကိုအလွန်အမင်းစည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ထားသည်။
အလွန်ကောင်းမွန်သောကော်မရှင်နှင့်အခကြေးငွေများအပြင် CMC Markets သည်စွန့်စားမှုစီမံခန့်ခွဲမှုနည်းလမ်းများစွာကိုပေးသည်။ ၎င်းသည်သင်၏ပြန့်ပွားသောအလောင်းအစားဆုံးရှုံးမှုများကိုအနည်းဆုံးဖြစ်စေရန်သေချာစေသည်။
၅။ FXCM - အကောင်းဆုံးအနိမ့်လောင်းကြေးများကစားပွဲပွဲစားကိုပျံ့နှံ့စေသည်
FXCM သည်စျေးသက်သာသောပျံ့နှံ့နိုင်သည့်အလောင်းအစားပွဲစားဖြစ်ပြီးသင်အားရှယ်ယာတစ်ခုလျှင် ၇ ပေါင်သာရှိသည်။ အကယ်၍ သင်သည်အာကာသထဲမှစတင်ပြီးသေးငယ်သည့်လောင်းကြေးများဖြင့်စတင်လိုပါကဤအရာသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
ပွဲစားသည်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများလိုင်စင်များစွာရရှိထားပြီး CFD နှင့် Forex trading ကိုလည်းထောက်ပံ့သည်။ များစွာသောငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းများသည်ကမ်းလှမ်းမှုများဖြစ်ပြီး၊ အကောင့်လျှောက်လွှာများကိုများသောအားဖြင့်ချက်ချင်းအတည်ပြုပေးသည်။
0.6 pips မှပျံ့နှံ့သွားသည်
၂း၁ နှင့် ၃၀ ကြား ၁
တစ်မှတ်နှုန်း 7p ၏အနိမ့်လောင်းကြေး
ကျွန်ုပ်တို့၏လမ်းညွှန်ကိုအပြည့်အ ၀ ဖတ်ရှုခြင်းဖြင့်ယခုတွင်အလွှာအလောင်းအစားမည်သို့မည်ပုံအလုပ်လုပ်ကြောင်း ၃၆၀ ဒီဂရီမြင်ကွင်းကိုမြင်တွေ့နိုင်လိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်တို့မျှော်လင့်ပါသည်။ သင်အလောင်းအစားများပျံ့နှံ့သောအခါသင်မည်သို့အနိုင်ရနိုင်ပြီးမည်သို့ဆုံးရှုံးနိုင်ကြောင်း၊ သင်ရောင်းဝယ်နိုင်သောဘဏ္financialာရေးဆိုင်ရာကိရိယာများနှင့်သင်၏ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောဆုံးရှုံးမှုများကိုလျော့ပါးစေရန်သင်တပ်ဆင်နိုင်သည့်စွန့်စားမှုစီမံခန့်ခွဲရေးကိရိယာများမှအရာအားလုံးကိုကျွန်ုပ်တို့ဖုံးကွယ်ထားသည်။
နောက်ဆုံးအနေဖြင့်၊ ပြန့်နှံ့သောအလောင်းအစားများသည်လူတိုင်းအတွက်မဟုတ်နိုင်သော်လည်းရိုးရာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလမ်းကြောင်းများမှအကျိုးကျေးဇူးများစွာရရှိစေသည်။ ဤအချက်၏ရှေ့တန်းမှအနေဖြင့်အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်များပေးသောကော်မရှင်ကင်းလွတ်သောကုန်သွယ်ရေးများနှင့်အခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနယ်ပယ်များတွင်ပြိုင်ဘက်ကင်းသောပြန့်ပွားမှုများဖြစ်သည်။
အရေးအကြီးဆုံးမှာ, ကျဆင်းခြင်းမပြုမီပြန့်ပွားလောင်းကစားခြင်း၏အခြေခံအန္တရာယ်များကိုသင်နားလည်ကြောင်းသေချာအောင်လုပ်ပါ။ နောက်ဆုံးတော့လေ့လာသူကုန်သည်အများစုကသူတို့စလုပ်တဲ့အချိန်မှာပိုက်ဆံဆုံးရှုံးကြပါတယ်၊ ဒါကြောင့်သတိထားပါ။
ပျံ့နှံ့သည့်အလောင်းအစားပလက်ဖောင်းများသည်များသောအားဖြင့်သင် CFD များမှတဆင့်သင်ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားလိုသည့်ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုရယူနိုင်သည်။ ကုန်ပစ္စည်း၊ အတိုးနှုန်း၊ ETFs နှင့် cryptocurrencies မှအရာအားလုံးပါ ၀ င်လိမ့်မည်။
ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်သဘောတရားအရပိုင်ဆိုင်မှုတစ်ခုသည်၎င်း၏လက်ရှိစျေးကွက်ပေါက်စျေးနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်တန်ဖိုးတိုးလာခြင်း၊ သင်မှန်ကန်သော 'အမှတ်' တစ်ခုစီအတွက်သင်၏လောင်းကြေးနှင့်ညီမျှသောပမာဏကိုသင်ရရှိသည်။
ပြန့်ပွားခြင်းလောင်းခြင်းတွင် 'ပျံ့နှံ့ခြင်း' ကဘာလဲ။
၎င်းသည်ပိုင်ဆိုင်မှု၏ 'long' နှင့် 'short' price တို့၏ကွာခြားချက်ဖြစ်ပြီး၎င်းကိုအချက်များတွင်ဖော်ပြထားသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ခြားနားချက်သည် ၅ မှတ်ဖြစ်ပါကချိုးဖဲ့ရန်အနည်းဆုံး ၅ မှတ်လုပ်ရန်လိုအပ်သည်။
ဟုတ်ကဲ့၊ ပြန့်နှံ့သောလောင်းကစားခြင်းကို CFD (သို့) Forex နေရာကဲ့သို့တူညီသောစည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ထားသည်။ အဓိကစည်းမျဉ်းသတ်မှတ်သူများသည် FCA (UK), ASIC (Australia) နှင့် CySEC (ဆိုက်ပရပ်စ်) တို့ဖြစ်သည်။
အမြတ်အစွန်းများသည်သင်၏ကန ဦး 'per-per-point' နှင့်သင်၏ကုန်သွယ်မှုရရှိသည့်အချက်များအပေါ်အခြေခံသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ အကယ်၍ သင်ဟာ Apple ရဲ့အစုရှယ်ယာတွေကိုမူလပေးဆောင်ခဲ့တဲ့ပမာဏထက် 200 မှတ်ပိုပေးပြီးတစ်ပေါင်ကို£5လောင်းမယ်ဆိုရင်ပေါင် ၁၀၀၀ ရမယ်။
သင်၏ကုန်သွယ်မှုသည်သင်၏တန်ဘိုးနှင့်ညီမျှသောရာခိုင်နှုန်းဖြင့်သင်နှင့်ဆန့်ကျင်ပါကသင်၏ကုန်သွယ်မှုကိုဖျက်သိမ်းလိမ့်မည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ သင်၏ margin သည် ၅%၊ သင်၏ကုန်သွယ်မှုတန်ဖိုးသည် ၅% ကျသွားလျှင်သင်၏ကုန်သွယ်မှုကိုပိတ်သိမ်းပြီးပွဲစားသည်သင်၏ margin သိုက်ကိုသိမ်းထားလိမ့်မည်။
အနည်းဆုံးအားဖြင့်ပျံ့နှံ့နိုင်သည့်အလောင်းအစားက်ဘ်ဆိုက်များသည်များသောအားဖြင့်သင့်အားဒက်ဘစ်သို့မဟုတ်ခရက်ဒစ်ကဒ် (သို့) ဘဏ်အကောင့်ဖြင့်ရန်ပုံငွေများကိုငွေသွင်းနိုင်သည်။ အချို့က Paypal နှင့် Skrill ကဲ့သို့ e-wallets များကိုခွင့်ပြုသည်။